IiNkqubo ezili-10 eziPhezulu zokuPhepha iNkunkuma yokutya Zonke iinkonzo ze-intanethi
Ezona zixhobo zi-10 zilungileyo zokuphepha inkunkuma yokutya
UIgnacio Sala | | Ukusetyenziswa kwe-Android
Rhoqo ngonyaka, izigidi zeekilos zokutya ziphelela enkunkumeni, nokuba ziphelelwe lixesha, ziye zonakala okanye zenze indawo efrijini yokugcina iimveliso ezintsha abazithengileyo, umkhuba ombi ekufuneka uphele ngokukhawuleza.
Nangona kunjalo, ngelixa abantu abazizityebi bezama ukwazi (into enzima kakhulu), abasebenzisi abaqhelekileyo, sinokusebenzisa usetyenziso oluthile olunokusinceda thintela inkunkuma yokutya kunye neengcebiso, iingcebiso kunye neengcebisoNdiyazi ukuba, nangona zibonakala zicacile, kunokwenzeka ukuba khange bayigqithe ingqondo yakho.
Enye yeemveliso ezihlala ziphela kudoti sisiqhamo kunye nemifuno, phantse i-50% yetotali eSpain. Ubutyala obuninzi abukho kubasebenzisi kuphela, kuba inkqubo yokuvuthwa kwimeko ezininzi ikhawuleziswa yinkqubo yangaphambili yokuvuna xa imveliso iluhlaza kwaye igcinwe kwisikhenkcezisi.
1 Sebenzisa i-blender
3 Kulungile Ukuya
4 Sigcina ukutya
7 Umciba uthi ewe
8 Ndiyavuya ukutya wena
Isisombululo senkunkuma yeziqhamo, imifuno kunye nemifuno kukusebenzisa i-blender. KwiAmazon sinokufumana abathengisi nge-30 0 40 euro. Ngalesi sixhobo singenza ngokukhawuleza nangemizuzwana I-vitamin ecebileyo iyanyikima xa isiqhamo siqala ukuvuthwa. Ngale ndlela siya kukuphepha ukusilahla kude nesiqhamo xa sele sivuthiwe kwaye asiziva ngathi sifuna ukusitya.
Ngelixa kuyinyani ukuba ukusebenzisa i-blender ayisosicelo kwaye kufuna utyalomaliUkuba sihlala sizithenga iziqhamo kwaye ixesha elininzi ziphelela emgqomeni, ngenxa yokugungqa, umzimba wethu uyakuxabisa kunye neepokotho zethu, kwaye ndikuthetha oku ndinolwazi lwenyani.
NgeNooddle asizukugcina imali ngokuthenga kwemihla ngemihla ngokusebenzisa izibonelelo zomzuzu wokugqibela ezivela kwiivenkile ezinkulu, nangona kunjalo, kuya kusinceda xa kufikwa vula ifriji ubone ukuba singatya ntoni nezithako esinayo ngalamzuzu efrijini, eya kuthi isincede siphephe ukulahla ukutya okuza kuhamba ngaphezulu.
Kuxhomekeke kwizithako esizifaka kwisicelo, ezinye iiresiphi okanye ezinye ziya kuboniswa. Uhlelo lokusebenza luyafumaneka simahla kodwa lubandakanya ukuthengwa kwangaphakathi nohlelo ukuze ufumane okuninzi kulo, ukuthengwa okusukela kwi-0,99 euro ukuya kwi-39,99 euro.
I-ekilu-iiresiphi ezisempilweni, umthambo kunye nengqondo
Umthuthukisi: INooddle App
Enye yezona zicelo zaziwayo eSpain zilunge kakhulu ukuya, isicelo pumntu onxibelelana nazo zombini iivenkile kunye nevenkile enkulu nabasebenzisi abaqhelekileyo, ukuze bakwazi ukuthenga ukutya okuza kuphelelwa ziibhetshi okanye ukutya okushiyekileyo ngexabiso elisezantsi kwaye ngaphandle kokubanyanzela ukuba bakuphose kwisitya.
Ndihlala edolophini enabantu abangaphantsi kwama-30.000 kwaye kukho iivenkile ezinkulu kunye neeresityu ezisebenzisa esi sicelon, ke akukho sizathu sokuqala ukuyisebenzisa nokuba awuhlali kwisixeko esikhulu.
Kulunge kakhulu ukuba ungaya - Gcina ukutya okukungqongile!
Umthuthukisi: Kulunge kakhulu ukuya kwii-Aps
Eli qonga lisebenza ngendlela efanayo neTo Good to Go, ukubeka zombini iivenkile kunye neeresityu ekunxibelelaneni nabathengi. Ndiyabulela kule sicelo, ukuba silindele izaziso, sinokufumana ukutya okuninzi ngexabiso eliphantsi ukuze ivenkile iphumelele kangangoko inganyanzelekanga ukuba iyilahle njengomsebenzisi ogcina ii-euro ezimbalwa ekuthengeni.
Umthuthukisi: SIKHULA ngokutya
Emva kwesicelo se-Yo akukho nkunkuma yi-NGO, i-NGO ejongene nokubeka abantu abadla ngokuthengisa iimveliso kunxibelelwano nabo bazifuna kakhulu. Isicelo senzelwe Amakhitshi esuphu, iivenkile zokutya… Hayi eyenzelwe uluntu ngokubanzi.
Umthuthukisi: Freepress S. Coop. Mad.
UPhenix usibeka ekunxibelelaneni namaziko okutya afuna ukunqanda ukulahla ukutya ngazo zonke iindleko ngokunikezela ngokutya okuninzi esinokukuqokelela ngokuthe ngqo kumaziko okutya. IMadrid, iBarcelona, ​​iValencia, iBilbao kunye neSeville.
Eli qonga lifumaneka kwakhona iivenkile zokutyela, abathengisi beentlanzi, oosilarha, iivenkile zokubhaka… Isicelo sisivumela ukuba sisekele uthotho lweefilitha ukukhetha ixesha apho kufanelekileyo kuthi ukuba sithathe iiodolo. Ukongeza, isinika inkqubo yenqaku lokunyaniseka kuthengiso ngalunye.
Phenix ¡actúa contra el desperdicio!
Umthuthukisi: Iphenix SAS
Umciba uthi ewe
Ukuthenga iziqhamo okanye imifuno kwivenkile enkulu kungabiza imali eninzi, ixabiso eliya libiza kakhulu ngenxa yabalamli abohlukeneyo kuthengwe kumfama ide ifike etafileni yethu. NgoLa colmena uthi ewe, sifumana iqonga elithi isivumela ukuba sithenge iimveliso ezisemgangathweni ngokuthe ngqo kubavelisi balapha ekhaya.
Asikwazi kuphela thenga iziqhamo kunye nemifuno, kodwa ke nesonka samasi, iwayini, inyama… Singafaka iiodolo ngqo kwisicelo kwaye siye kwindawo yokuhambisa esikufutshane nasekhaya. Okanye sinokusebenzisa inkqubo yokuhanjiswa kwekhaya.
Inyosi ethi Ewe!
Umthuthukisi: EQUANUM LA RUCHE QUI DIT OUI
Ndiyavuya ukutya wena
Enkosi ngokukutya, sinako husondele kuthi unokutya okuninzi ezingathengiswanga imini yonke kwiivenkile ezithengisa ukutya ngesaphulelo ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-50. Ngokusebenzisa isicelo sinokukhetha uninzi olunomdla kuthi kwaye siluthathe.
Ngokungafaniyo nezinye izicelo zolu hlobo, kunye nesicelo esiNomdla sokutya, ungahlawula ngokuthe ngqo Nje ukuba ukhethe iqashiso elinomdla kakhulu kuwe, ukuze kuthi wakufika kwivenkile uyokuyithatha, awunyanzelekanga ukuba ume emgceni.
Ndichukunyiswe kukutya * jonga uluhlu lweedolophu
Umthuthukisi: Ndicetyelwe ukuTya wena (i-EoC)
NgoGeev, sinako nikela konke ukutya okanye iimveliso zokuhombisa esinayo emakhayeni ethu kodwa esingacwangcisi ukuyisebenzisa, ikwayindlela efanelekileyo yokuphepha ukulahla okona kutya kudala kwifriji yethu xa singakhange senze uqikelelo xa kuthengwa kwaye yonke into ayihambelani thina efrijini.
Isicelo siyafumaneka khuphela mahalaNangona kunjalo, kubo bonke abo basebenzisi abafuna ukufumana inani elikhulu leemveliso ngexabiso elifanelekileyo, sinokusebenzisa umrhumo wenyanga (i-7,99 euros) okanye yonyaka (i-euro ezingama-29,99).
UGeev: Isisombululo sokulwa inkunkuma
IOlio sisicelo esisibeka kunxibelelwano neevenkile zalapha ukuze babelane ngokutya okuseleyo kunye nezinto zekhaya ngaphambi kokubathintela ekuphelelweni emgqomeni. Ukongeza, kusivumela ukuba sinxibelelane nabamelwane bethu singachazwanga xa siceba ukwahlula ukutya esingazukukutya kwaye sincede abanye abantu abanokukufuna.
Ngokucacileyo, kuya kufuneka unikezele ngokutya okanye iimveliso esiya kuba zizo ukulungele ukutya okanye ukusebenzisa. Ukubhengeza iimveliso ongasazifuniyo, kuya kufuneka uzifote kwaye ungeze inkcazo emfutshane kunye nedilesi yokuqokelela (ukuba asifuni kudibana kwenye indawo). Ukongeza, yindlela emnandi yokuhlangana nabamelwane abatsha, ngakumbi ukuba sibatsha esixekweni, kubumelwane, edolophini ...
OLIO - Yabelana ngaphezulu. Inkunkuma incinci.
Zonke iiapps endizithethileyo kweli nqaku, sebenzisa indawo ye-smartphone yethu ukufumana iivenkile kunye neeresityu ezikufutshane nendawo esime kuyo, ke kufuneka sivumele ukufikelela kwiGPS yesixhobo sethu nje ukuba sifake usetyenziso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ezona zixhobo zi-10 zilungileyo zokuphepha inkunkuma yokutya
Eyona midlalo mithandathu ilungileyo yokudlala ngaphandle kweintanethi kwi-Android
Iimidlalo ezi-14 ezilungileyo kakhulu ze-Android